मात्र ४० हजार लगानी , आम्दानी तीन महिनामै ६ लाख ! – Gandaki Chhadke
मात्र ४० हजार लगानी , आम्दानी तीन महिनामै ६ लाख !
By गण्डकी छड्के Last updated Oct 29, 2020
काठमाण्डौ । कम समय र कम लागतमा राम्रो आम्दानीको विकल्पको खोजीमा रहेकाहरुका लागि मे’डिसनल प्लान्ट(औ’षधीय गुण भएका वनस्पति)को खेती तथा व्यापार निकै ला’भदायक हुन्छ । यस्ता प्लान्टको खेतीका लागि न त ठूलो फ’र्मको आवश्यकता पर्छ, न त ठूलो लगानी नै आवश्यक पर्छ । यी वनस्पतिहरुको खेती तपाईले लिजमा जमीन लिएर समेत गर्न सक्नुुहुन्छ । अधिकांश औ’षधीजन्य वनस्पति ३ देखि ६ महिनाभित्र तयार हुन्छ । यसपछि यी वनस्पतिबाट लगातार आम्दानी हुुन्छ ।यदि तपाईले तुलसीको खेती गर्नुहुन्छ भने २० देखि ४० हजारसम्मको लगानीमा तपाईले केबल ३ महिनामा ४ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नुुहुन्छ ।
३ महिनामै तयार हुन्छ तुलसी:तुलसीलाई हिन्दूहरुले विशेष गरी धार्मिक दृ’ष्टिकोणले महत्वपूर्ण ठान्छन् । तुलसीको पूजा गर्नु, मानिस म’रेलगत्तै तुलसीको मो’ठमा लगेर श’वलाई राख्नु लगायतले समेत यो वनस्पति कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ । धार्मिक मान्यता अनुसार तुलसीको जति महत्व छ, यसको औ’षधीय गुणका कारण बजारमा अझ ठूलो महत्व र डिमाण्ड छ । लामो समयदेखि धेरै औ’षधि उद्योगहरुले तुलसीबाट उत्पादन हुने तेललाई विभिन्न औ’षधीहरुको निर्माणमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तुलसीको खेती चैत वा बैशाखबाट सुरु गर्न सकिन्छ ।
यसको खेती बिज वा हाँगालाई क’लमी गरेर समेत गर्न सकिन्छ । एक हेक्टरमा यसको खेतीका लागि लगभग १० किलोग्राम जति बिउको आवश्यकता पर्छ । तुलसीको बोट निकै क’ठोर हुन्छ, जसका कारण सानातिना रोगले यो वनस्पतिलाई छुन सक्दैन । रोपेको ८० देखि ९० दिनसम्म तुलसी बिक्रीका लागि तयार हुन्छ । एक अध्ययन अनुसार तुलसीको खेती २० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म गर्न सकिन्छ । यो बजेटमा केही घटबढ ठाउँ र सिंचाई तथा अन्य बिषयको सहजताको हिसाबले पनि हुनसक्छ । तुलसीको राम्रो बिउ नेपाल र भारतका विभिन्न बजारहरुमा पाइन्छ ।
रो’ग तथा किराहरुको कम आक्रमण हुने भनी पहिचान भएको तुलसीको प्र’जातिको खेती गर्न सकियो भने अझ बढी फाइदा हुन्छ । थोरै खर्च र छोटो अवधिमा तुलसीको खेतीबाट धेरै राम्रो आम्दानी हुने जानकार बताउँछन् । तुलसीको खेतीबाट दुुई प्रकारका उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहिलो बिउ र दोश्रो पात । यसको बिज उत्पादन गरेर समेत बिक्री गर्न सकिन्छ भने पातबाट तेल नि’कालेर राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ । एक हेक्टर क्षेत्रफलबाट लगभग १२० देखि १५० किलोग्रामसम्म तुलसीको बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ ।राम्रो बाली छ भने एक हेक्टर क्षेत्रफलबाट १७० देखि २ सय किलोग्रामसम्म पातबाट तेल नि’काल्न सकिन्छ ।
तुलसीको बिउ प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँसम्म बिक्री हुन्छ । यस्तै, तेलको मूल्य अहिलेको समयमा प्रति किलोग्राम १३ सयसम्म रहेको छ । यदि थोरै मात्र आम्दानी भयो भने पनि एक हेक्टरबाट ३ महिनामै ४ देखि ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ । चीनपछि भारत दोश्रो देश हो, जहाँ जडीबुटीको बिषयमा नि’धै धेरै रिसर्च हुन्छ । यहाँको बजार समेत नि’कै ठूलो छ । छिमेकी देशको यो बजारलाई टा’र्गेट गरेर औ’षधीजन्य वनस्पतिहरुको खेती गर्न सकिए अझ फाइदा लिन सकिन्छ । नेपालकै औ’षधी उद्योगहरुलाई आ’पूर्ति गर्ने हिसाबले समेत तुलसी लगायतका औ’षधीय गुण भएका वनस्पतिहरुको खेती गर्न सकिन्छ ।
तुलसीजस्ता अन्य वनस्पतिहरुको समेत उच्च माग रहेको छ । जस्तो, आ’र्टिमिशिया ए’न्नुुआको पनि उच्च डि’माण्ड छ, यो वनस्पतिबाट चाहि म’लेरियाको औ’षधि बनाइन्छ । यो यस्तो मे’डिकल प्लान्ट हो जुन भारत र चीन बाहेक नेपालमा समेत पाइन्छ । यस बाहेक अन्य मे’डिसिनल प्लान्ट जस्तै, अ’श्वगन्धा, ए’लोभेरा, ह’र्दी(बेसार) लगायतको समेत खेतीबाट राम्रो आम्दानी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बिजशाला
दशैं टिकाको दिन सडकमै बि’ते संगम …
३५ सय १७ संक्रमित थपिँदा ४ हजार ९६ जना डिस्चार्ज